Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Sunday, September 16, 2012 Sunday, September 16, 2012 Labels: စားသောက်ဖွယ်ရာ
ဒီတစ်ပတ်ချက်စားဖြစ်တဲ့ ဟင်းကတော့ အိမ်ကိုလွမ်းလို့ ချက်စားဖြစ်တဲ့ မျှစ်ဟင်းဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ကိုလွမ်းလို့ချက်စားတဲ့ဟင်းဟာ အသားငါးတွေနဲ့ ချက်ထားတဲ့ ဟင်းမဟုတ်ဘဲ မိုးရာသီမှာအလွန်ပေါတဲ့ မျှစ်ဟင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဟင်းဟာ ကျွန်မတို့အိမ်မှာ အမေက ခုလိုမိုးရာသီမှာ မကြာခဏ ချက်ကျွေးတဲ့ဟင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးရာသီမျှစ်တွေ ပေါတဲ့အချိန်မှာ မျှစ်ကိုမြင်တော့ အိမ်ကို သတိရတာကြောင့် ချက်စားဖြစ်တာပါ။ ဒါကြောင့်အိမ်ကိုလွမ်းလို့ ချက်တဲ့ဟင်းလို့ နာမည် ပေးလိုက် ပါတယ်။
ဒီမျှစ်က ဝါးပိုးဝါးတို့လို ဝါးအကြီးမျိုးရဲ့ မျှစ်ပါ.. အလယ်မှာ အခေါင်းပိတ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမျှစ်ကို ချက်စားမှာပါ။
အဲဒီမျှစ်ကို ပါးပါးလှီးတာမဟုတ်ဘဲ ဓါးနဲ့ပေါက်ပါတယ်။
ရလာတဲ့ မျှစ်တွေထဲက တစ်ဝက်ကို ရေစိမ်ထားလိုက်ပါတယ်။ တစ်ဝက်ကိုတော့ မျှစ်ဆိမ့်ချက်စားပါမယ်
ဒီမျှစ်ဆိမ့်ချက်ဖို့ လိုအပ်တာတွေကတော့ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြည်သွန်နီ၊ ဆား၊ အရသာမှုန့်၊ ပုဇွန်ခြောက်၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ မြေပဲဆန်မညက်တညက်ထောင်း၊ အရောင်တင်၊ နွနင်းမှုန့်၊ဆီ အနည်းငယ်တို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဆီတိုဖူး( သို့) မဟုတ် ငပိ အနည်းငယ် ထည့်ပါတယ်။ ထို့နောက် ခဏလောက် ဟင်းကို လုံးပါတယ်။
ရေထည့်ပြီး မီးပြင်းပြင်းဖြင့် အနည်းဆုံး ၂ရေခန့် ခမ်းအောင် တည်ပါတယ်။ သို့မှသာ မျှစ်တွေနူးပြီး စားလို့ကောင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂ရေလောက် ထပ်ထည့်ပြီးနောက် အရသာအပေါ့အငံ စိတ်ကြိုက်ထည့်ကာ ရေခပ်များများချန်ပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
ရှမ်းနံနံလေးခတ်ပြီး စားသုံးရင် အရသာနူးညံ့ပြီး ဆိမ့်သက်တဲ့ မျှစ်ဆိမ့်ဟင်းတစ်ခွက် ရပါပြီ။
နောက်ထပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဟင်းကတော့ မျှစ်ရေစိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ စောစောက ရေစိမ်ထားတဲ့ မျှစ်ကို ၃ရက်လောက် ရေစိမ်ထားပါတယ်။ ၃ရက်အတွင်းမှာ ရေကို မကြာခဏလဲပေးပါတယ်။ ၄ရက်လောက်ဆို မျှစ်ရေစိမ် ချက်စားဖို့သင့်တော်တဲ့အနေအထားရပါပြီ။
ရေစိမ်ထားတဲ့ မျှစ်တွေကို ဆေးကြောထားလိုက်ပါတယ်။
ရေနွေးကိုဆူတောင်တည်ပြီး ကြက်သွန်ဖြူ၊ ပုဇွန်ဆိတ်လေးများကို ထည့်လိုက်ပါတယ်။ ဆား၊အသားမှုန့်တို့ကိုထည့်ပါတယ်။
ချကာနီးမှ ပင်စိမ်းရွက်လေး ခတ်လိုက်ပါတယ်
နောက်ထပ် ချက်စားဖြစ်တာကတော့ အခုလို မျှစ်ကိုဘဲ ပါးပါးလှီးပြီး ၃ရက်လောက် ရေစိမ်ထားတဲ့ မျှစ်ကို ဝက်သားနဲ့ ကြော်စားတာပါ။
ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်းတို့နဲ့ ဝက်သားကိုပါးပါးလှီးပြီး ကြော်ပါတယ်။
ဝက်သားကျက်ရင် မျှစ်ကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။ ဆား၊ အရသာမှုန့်၊ ပဲငံပြာရည် အနည်းငယ်ထည့်ပါတယ်။
ထို့နောက် ငရုပ်သီးများကိုထည့်ပြီးနောက် ၃မိနစ်လောက်ဆို စားနိုင်ပါပြီ။
ကျွန်မတို့ကချင်ပြည်နယ်ဟာ တောတောင်တွေ အလွန်ပေါတာကြောင့် မျှစ်၊ဝါးလည်း အလွန်ပေါပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်ကဆိုရင် ကျွန်မတို့ရွာမှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆိုတာ တောတောင်ထဲ ဝင်ရှာရင် အလွယ်တကူ ရှာလို့ ရပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ ခုချိန်မှာတော့ တောတွေပြုန်း၊ တောင်တွေ ဖြိုချခံရပြီး နောက်မှာတော့ မျှစ်ဝါး နဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ဆိုတာ အလွန်ကို ရှားသွားပါပြီ.. တောတွေတောင်တွေ ယခင်အတိုင်း ပြန်မဖြစ်နိုင်ရင်တောင် ခုရှိတဲ့အတိုင်းကို ဆက်လက်ပြီး မပြုန်းတီးအောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ ဆုတောင်းမိရင်း တောမှာချက်စားတဲ့ မျှစ်ဟင်းချက်နည်းကို အိမ်အလွမ်းပြေချက်စားဖြစ်တာ အားလုံးကို ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်ရှင်..
ရေခဲတောင်ပေါ်က ထူးဆန်းသော ပိုးကောင်တစ်ဖြစ်လဲ အပင်ငယ်ကလေးများ
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Wednesday, September 12, 2012 Wednesday, September 12, 2012 Labels: သုတအဖြာဖြာ
ဒီတစ်ပတ် စိတ်ဝင်စားမိတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကို ရေးချင်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကျွန်မတို့ ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ ရေခဲတောင်ပေါ်မှာ ပေါက်ဖွားပြီး ဆေးဘက်ဝင် တန်ဖိုးကြီးလှတဲ့ ရှီးပဒီးလို့ခေါ်ကြသော အကောင်တစ်ပိုင်း၊ နွယ်ပင်တစ်ပိုင်း အကြောင်းကို လက်လှမ်းမီသလောက် ရှာဖွေကြည့်ထားတာလေး ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ ရေခဲတွေ ဖုံးလွမ်းနေတဲ့ တောင်တန်းကြီးတွေမှာ ဆေးဘက်ဝင်တဲ့ ရှားပါးသစ်ပင်များနဲ့ တိရိစ္ဆာန်များကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဆောင်းမှာ ပိုးကောင်၊ နွေမှာ သစ်ပင် လို့ ခေါ်ကြတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဒီ ရှီးပဒီးဟာ အလွန်မြင့်မားတဲ့ ရေခဲတောင်တွေမှာသာ တွေ့ရှိရပါတယ်။ ပေပေါင်း များစွာ မြင့်မားတဲ့ ရေခဲတောင်တွေ ရှိရာ ဒေသဖြစ်တဲ့ ဟိမဝန္တာ တောင်တန်း ဖြာဆင်းရာ တရုတ်၊ တိဘက်၊ နီပေါ၊ ဘူတန်နဲ့ မြန်မာပြည်မြောက်ဖျား ရေခဲတောင်တန်းတွေမှာ တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ တရုတ် တိုင်းရင်း ဆေးဝါးတွေမှာ ထည့်သွင်းဖော်စပ်ကြပြီး ဈေးလည်း အလွန်ကြီးတဲ့ ဆေးဘက်ဝင် အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုးနွယ်ရှင်ခေါ် ရှီးပဒီးဖြစ်ပေါ်လာပုံက ထူးထူးဆန်းဆန်းလို့ ပြောရမှာပါဘဲ။ အကောင်မဖြစ်ခင် သန္ဓေ သားလောင်း ဖြစ်တဲ့ ပိုးဥကောင်လေးတွေဟာ ဆောင်းရာသီအချိန်မှာ အလွန် အေးလွန်းတာကြောင့် မြေကြီးထဲမှာ ဆေးဘက်ဝင် မဂျစ်ဥ၊ ခန်းတောက်မြစ် တို့ကိုစားသုံးပြီး ဆောင်းခိုနေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို ဆောင်းခိုနေတဲ့အချိန်မှာ ပိုးလောင်းကောင်လေးတွေဟာ မြေကြီးအောက်မှာ ငြိမ်သက်နေသော်လည်း ကပ်ပါမှိုတစ်မျိုးရဲ့ တွယ်ကပ်ငြိတွယ်ခြင်းခံရပြီး ၄င်း ကပ်ပါးမှိုဟာ ပိုးလောင်းကောင်လေးတွေကို ဖုံးလွှမ်း သွားခဲ့ပြီး နွေရာသီရောက်ချိန်မှာ ပိုးလောင်းကောင်လေးများရဲ့ ဦးခေါင်းပေါ်ကနေ မြက်ပင်နဲ့ ဆင်တဲ့ ဦးချိုသဖွယ် အညှောင့်ကလေး ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အညှောင့်ကလေးတွေဟာ ၅စင်တီမီတာကနေ ၁၅စင်တီမီတာအထိ ရှည်လျားစွာ ထွက်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒေသခံတွေရဲ့ အဆိုအရတော့ အဲဒီအချိန်ဟာ ပိုးကောင်ဘဝကနေ နွယ်ပင်အဖြစ် ရှင်သန်ချိန်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ရေခဲချိန်မှာ ပိုးကောင်၊ ရေခဲတွေ အရည်ပျော်ပြီး မြေကြီးတွေ မြင်ရချိန်မှာတော့ အပင် ဖြစ်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၄င်းရေခဲများ အရည်ပျော်ချိန်မှာ မြေအောက်က ပိုးလောင်းကောင်လေးတွေရဲ့ ဦးခေါင်းကနေ အပင်လေး ထွက်လာတဲ့အခါ ဒေသခံ တောင်ပေါ်သားများက ရှာဖွေ စုဆောင်း ကောက်ယူ ကြပါတယ်။ တောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာ ရှေးယခင်ကတည်းက ဆေးဘက်ဝင်တယ်လို့ သိခဲ့ကြတာကြောင့်လည်း ၄င်း ပိုးကောင်လေးများကို ရှာဖွေ စုဆောင်းသူများပြားလှပါတယ်။ ကျန်းမာရေး အတွက် အလွန် အကျိုးပြုပြီး ဆေးဘက်ဝင်လှတဲ့ ရှီးပဒီး ပိုးကောင်လေးတွေဟာ ဈေးကောင်းလည်း အလွန် ရပါတယ်လို့ သိရပါတယ် ။ ကျွန်မဖတ်မိတဲ့ စာလေးတစ်ခုမှာဆိုရင် အဲဒီ အကောင်လေး တစ်ကောင်ကို မြန်မာငွေ တစ်သောင်းခွဲခန့် ပေးရပြီး တစ်ပိသာကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃ဝဝဝဝ လောက် တန်ဖိုး ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပေ တစ်သောင်းကျော်မှာတွေ့ရတဲ့ ပိုးကောင်လေးတွေက ပိုပြီး ဈေးကောင်းရတယ်လို့သိရပါတယ်။
တိဘက်တောင်တန်းပေါ်က ရှီးပဒီးပိုးနွယ် ရှာဖွေသူနှစ်ဦး
ရေခဲတွေ အရည်ပျော်ပြီး မြေကြီးတွေ ပေါ်လာချိန်မှာ လူစုလူဝေးတွေ ရောက်လာပြီး ရှီးပဒီးပိုးနွယ်လေးများကို ရှာဖွေကြစဉ်
ရှီးပဒီးခေါ် ပိုးနွယ်လေးရဲ့ အစွမ်းထက် ဆေးဘက်ဝင်မှုတွေက တော်တော်ကိုများပြားပါတယ်။ အရသာမှာ ချိုပြီးဆိမ့်တဲ့အရသာရှိတယ် ဆိုပါတယ်။ ၄င်းရှီးပဒီး ပိုးကောင်လေးတွေကို အခြောက်လှမ်းပြီး အမှုန့်ပြုလုပ်ကာ ရောင်းချတတ်ကြပါတယ်။
အဟာရဓာတ် ပါဝင်မှု များပြားတဲ့အတွက် ဖျားနာပြီး နလံထစလူနာတွေ အမြန်ဆုံး ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်လာစေခြင်း
ကျောက်ကပ်ကို ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ချောမွေ့စေခြင်း
ချောင်းဆိုး၊ ရင်ကြပ်ရောဂါများကို သက်သာစေခြင်း
သွေးဥများကို တိုးပွားစေခြင်း သွေးရည်ကြည်အတွက် ပရိုတိန်းများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ သွေးဖိအား များခြင်း၊ နည်းခြင်းကို ပုံမှန်အတိုင်း ဖြစ်စေနိုင်ခြင်း
ကိုယ်ခံအားကို မြင့်မားစေခြင်း၊ အဆုပ်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ကောင်းမွန်စေခြင်း
အမျိုးသမီးများ ဓမ္မတာကောင်းမွန်စေခြင်း ၊ နုပျိုစေခြင်း၊ အရေးအကြောင်းများကို ပျောက်ကင်း သက်သာစေခြင်း
စသဖြင့် အကျိုးများလှတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရှားပါးတာကြောင့်ရော ၊ ဆေးဘက်ဝင်တာကြောင့်အတွက်ပါ တန်ဖိုးကြီးလှပါတယ်။ နေ့စဉ်ပုံမှန် အားဆေး အဖြစ် သောက်သုံး ကြသူများလည်း ရှိကြပါတယ်။ ၄င်း ပိုးဆေးနွယ်( ရှီးပဒီး) များကို တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ကိုးရီးယားစသည့်နိုင်ငံများက ဝယ်ယူကြကြောင်း သိရပါတယ်။ အချို့သော အားကစား သမားတွေ ဟာလည်း ကိုယ်ခံစွမ်းအားမြင့်မားပြီး အမောအပန်း ခံနိုင်ဖို့ရန်အတွက် ပိုးနွယ်ပင်ကို အမြဲတမ်း မှီဝဲ စားသုံးကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အချို့သောသူတွေက စွပ်ပြုတ်ထဲ ထည့်ချက်ခြင်း၊ ၄င်း ရှီးပဒီး သက်သက်ကိုလည်း စားသုံးခြင်းများ ပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ တိဘက်ဒေသတွေမှာ ၄င်းဆေးပိုးနွယ်ကို အမြောက်အမြား ရှာဖွေရရှိပြီး ငွေကြေးစီးပွား တိုးတက်လာကြသူတွေ အများအပြား ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာပြည် မြောက်ဖျား ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ မြင့်မားလှတဲ့ ရေခဲတောင်တွေထက်မှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်တဲ့ အကောင် တစ်ပိုင်း နွယ်ပင်တစ်ပိုင်း ရှီးပဒီး ကို စနစ်တကျလေ့လာခြင်း၊ သုတေသနပြုလုပ်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်ပြီး ယနေ့ ခေတ်စားလှတဲ့ ကိုရီးယားဂျင်ဆင်းတို့လို စီးပွားဖြစ် မွေးမြူစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်မယ် ဆိုရင်တော့ ဒေသခံတွေအတွက် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်လည်း ထိခိုက်ပျက်စီးမှု ကြီးကြီးမားမား မရှိတဲ့အပြင် ဝင်ငွေတိုးရုံသာမက၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း အသစ်တွေပါ ရရှိတိုးပွားလာစရာ ရှိကြောင်း စိတ်ကူးယဉ် အိပ်မက်မိပါတော့တယ်ရှင်။
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Thursday, September 06, 2012 Thursday, September 06, 2012 Labels: သုတအဖြာဖြာ
ကန္တာရရယ်လို့ ပြောလိုက်ရင် အင်မတန်မှ ကြောက်စရာကောင်းပြီး သေမင်းတမန် နယ်မြေလို့တောင် တင်စား ကြတာကိုဘဲ ကြားဖူးကြမယ် ထင်တယ်နော်။ ကန္တာရကို စာတွေထဲမှာ ဖော်ပြကြရင်လည်း အင်မတန်မှ ခြောက်သွေ့ ကြမ်းတမ်းပြီး၊ နေအလွန့်အလွန်ပူပြင်းတဲ့ ဒေသ၊ မြွေတွေပေါပြီး အလွန် ထူထပ်တဲ့ သဲပြင်တွေချည်း ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ ဒေသ ၊ ရေတစ်စက်မှမရှိ၊ မိုးတစ်စက်မှ မရွာတဲ့ ဒေသ၊ အလွန် ကြောက်စရာ ကောင်းတဲ့ နေရာဒေသ တစ်ခုအဖြစ် ပုံဖော်ကြလေ့ရှိပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ ခြောက်သွေ့ ပေမဲ့ သဲပြင်တွေနဲ့ လှပတဲ့ ဒေသဟာ ကန္တာရလည်း ရှိတယ်လို့ ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့ Maranhenses အမျိုးသား သဲကန္တာရဟာ အင်မတန်မှ လှပပြီး အဖြူရောင်သဲပြင်ကြီးတွေ ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ ကန္တာရ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီကန္တာရထဲမှာ ကြည်လင်ပြီး အေးမြနေတဲ့ ရေကန်ငယ် တစ်ခုလည်း ရှိပါတယ်။
အဖြူရောင် ကန္တာရဟာ ကန္တာရထဲကို ခရီးသွားလာသူတို့အတွက် နိဗ္ဗာန်ဘုံလေးတစ်ခုလို့တောင် တင်စားလို့ ရလောက်အောင် လှပသာယာတဲ့ နေရာလေးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့ မြောက်ဘက်မှာ တည်ရှိပြီး ကီလိုမီတာ တစ်ထောင်ခန့်ကျယ်ဝန်းပါတယ်။ သို့သော်လည်း ၄င်းအဖြူရောင် ကန္တာရထဲမှာ ရေကန်ငယ်လေး ရှိပြီး မိုးလည်း ပုံမှန်ရွာသွန်းတတ်သော်လည်း သစ်ပင် အလွန် နည်းပါးပါတယ်။
သဲပုံတွေကြားက ပုံသဏ္ဍာန် အမျိုးမျိုးနဲ့ ရေအိုင်တွေဟာ မိုးရွာပြီးတာနဲ့ ရေတွေ ပြည့်လာတတ်ပြီး အပြာရောင် ကနေ အစိမ်းရောင်အထိ မိမိကြည့်ရှုတဲ့နေရာ အနေအထားကိုလိုက်ပြီး အရောင် ပြောင်းနေတာ ကို တွေ့ရပါတယ်။အဖြူရောင်သဲပြင်တွေကြားက မြင်ရတဲ့ ရေအိုင်တွေဟာ ကျောက်မျက် ရတနာ တောက်ပနေသလိုမျိုး လှပစွာ တွေ့မြင်နိုင်တာ ဟာလည်း အဖြူရောင်ကန္တာရရဲ့ ထူးခြားစွာ လှပတဲ့ အချက်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
သာယာလှပတဲ့ အဖြူရောင်ကန္တာရကို ဘရာဇီးအစိုးရရဲ့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့အစီအစဉ်အနေနဲ့ မည်သည့်ကိုယ်ပိုင်ကားတွေကိုမှ ဝင်ခွင့်မပြုပါဘူး။ ဥယျာဉ်က စီစဉ်ထားတဲ့ လေးဘီး ထရပ်ကားတွေနဲ့သာ အတွင်းထဲကို ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပါတယ်။
ကန္တာရထဲက ကြည်လင် သန့်စင်နေတဲ့ ရေအိုင်ထဲမှာ ငါးတွေကိုတောင် တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီလောက်တောင် လွင်တီးခေါင် သဲကန္တာရထဲ ငါးတွေကို ဘယ်က ဘယ်လို ဝင်ရောက်လာသလဲ စဉ်းစားစရာပါ။ သို့ပေမဲ့ ဖြစ်နိုင်တာက ပင်လယ်ပျော်ငှက်တွေဟာ ငါးတွေကို ပင်လယ်ကနေ စားသောက်ပြီး ငါးထဲမှာ ပါလာတတ်တဲ့ ငါးဥတွေဟာ ငှက်တွေရဲ့ ဝမ်းထဲကိုရောက်သွားပြီး မစင်မဖြစ် ရေကန်နား စွန့်ပစ်မိရာက ၄င်း ငါးဥကနေ ငါးတွေ ရှင်သန်ပေါက်ဖွား လာတာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မျက်စိတဆုံး ကျယ်ပြောလှတဲ့ သဲပြင် ဖြူလွလွတွေကြားမှာ စိမ်းစိုစိုရေကန်တွေ တည်ရှိနေတာဟာ ရောက်လာသူတိုင်းရဲ့ စိတ်နှလုံးကို သိမ်းကျုံးဆွဲငင်နိုင်စွမ်း ရှိလှတဲ့အတွက် ဘရာဇီးက သဘာဝအလှအတိုင်း တည်ရှိဆဲ အဖြူရောင်ကန္တာရကို လာရောက်လည်ပတ်သူတွေ တစ်နေ့တစ်ခြား များပြားလို့လာပါတယ်။ လာရောက်လည်ပတ်သူတွေကြောင့် အဖြူရောင်ကန္တာရရဲ့ အလှအပတွေ ပျက်စီးမှာ၊ ရေကန်တွေ ညစ်နွမ်းမှာ၊ ခမ်းခြောက်မှာကိုတော့ တာဝန်ရှိသူများက ထိမ်းသိမ်း စောင့်ရှောက် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခါအခွင့် သင့်ရင်တော့ အဖြူရောင် သဲသောင်ပြင်တွေနဲ့ လှပနေတဲ့ ကန္တာရထဲကို ရောက်ဖူးချင်ပါသေးတယ်ရှင်...
အားလုံးဘဲ ကြည်လင်ရွှင်လန်း ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ..
Photos ; http://planetoddity.com
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Sunday, September 02, 2012 Sunday, September 02, 2012 Labels: စားသောက်ဖွယ်ရာ
ဒီတစ်ပတ်အတွက် ချက်စားဖြစ်တဲ့ ရာသီစာ ဟင်းလေးတစ်ခွက်ကို ဘလော့ဂ်လာ မိတ်ဆွေများအတွက် ပြန်လည် မျှဝေချင်ပါတယ်။ ခုရာသီမှာ ကျွန်မ နေတဲ့ မြို့ကလေးမှာ မက်မွန်သီး ( Peach) တွေ အလွန်ပေါပါတယ်။ မက်မွန်သီးတွေဟာ အလုံး တော်တော်လေးကို ကြီးပြီး လက်သီးဆုပ် နီးနီးလောက်ကို ရှိပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်က မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်က အဲဒီမက်မွန်သီးတွေ တော်တော်များများကို လက်ဆောင်လာပေးပါတယ်။ စားလို့လည်း မနိုင်နိုင်အောင် ပါဘဲ။ မက်မွန်သီးက သိပ်မမှည့်သေးရင် အနည်းငယ် ချဉ်တဲ့အရသာရှိတော့ များလှတဲ့ အသီးတွေကို ဒီတိုင်းကုန်အောင် စားဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ ဟင်းချက်စားဖို့ ကြံရပါတယ်။ ဒီတော့ မက်မွန်သီး တွေကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဟင်းအဖြစ် စားဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပြောပြပါမယ်နော်။
သိပ်မမှည့်သေးတဲ့ မက်မွန်သီးတွေကို ရွေးချယ်ပါတယ်။ မှည့်သွားရင် ပျော့သွားတာကြောင့် ဟင်းချက် စားဖို့ မကောင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။
မက်မွန်သီးတွေကို ရေစင်အောင်ဆေး၊ အခွံနွာပြီး ခုလို ပါးပါးလှီးပါတယ်. ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ ငရုပ်သီးတို့ကို ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ ဝက်သားကို ပါးပါးလှီးပြီး ဆား၊ ဟင်းချက်ဝိုင်၊ အရသာမှုန့်တို့နဲ့ နယ်ထားလိုက်ပါတယ်.
ပထမဦးစွာ ဝက်သားကိုအရင်ကြော်ပါတယ်။ ဝက်သားကျက်တာနဲ့ မက်မွန်သီးကိုထည့်ပြီး ခရမ်းချဉ်သီး၊ ငရုပ်သီးတို့ကိုထည့်ကာ ဆား၊ အရသာမှုန့်၊ ငံပြာရည်အကြည်တို့ ထည့်လိုက်ပါတယ်.။ ရေအနည်းငယ် ထည့်ပြီး မက်မွန်သီးတွေ ကျက်အောင် ချက်ပါမယ်။
ဟင်းအိုး မချခင်မှာ ရှမ်းနံနံတစ်ခုခု သင့်တော်ရုံပမာဏ ထည့်လိုက်ပြီးရင်တော့ ချဉ်ချိုချိုလေးနဲ့ အရသာတစ်မျိုးထူးတဲ့ ဝက်သား မက်မွန်သီး ကြော် ရပါတယ်။
နောက်တစ်ကြိမ်မှာတော့ ဝက်သားဆားငံခြောက်ကို အငံပေါ့အောင် တစ်ညလုံးရေစိမ်ထားပြီး မနက်မှ ပါးပါးလှီးပြီး မက်မွန်သီးနဲ့ ကြော်ပြန်ပါတယ်။ ဆားလေးလေးနဲ့ ဝက်သား အရသာမှာ မက်မွန်သီး က အချိုနဲ့ အချဉ်က ရောစပ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ အတော်လေးကို လျှာရင်းမြက်တဲ့ ဟင်တစ်ခွက်ရစေပါတယ်။ ကျွန်မအိမ်မှာတော့ ဒီဟင်းကို မြည်းစမ်းဖူးသူတွေအားလုံးကလည်း စားလို့ကောင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်တွေ ပေးကြပါသေးတယ်း))
အရသာရှိပြီး လွယ်လဲလွယ်ကူ၊ မက်မွန်သီးတွေ ပေါနေတဲ့ ခုလိုရာသီအတွက်လည်း အဆင်ပြေ တာကြောင့် မကြာခဏ ချက်စားဖြစ်တဲ့ ဝက်သား မက်မွန်သီးကြော်ပါ။ ဝက်သားနေရာမှာ တစ်ခြား မိမိနှစ်သက်ရာ အသားနဲ့လည်း ချက်စားနိုင်ပါသေးတယ်နော်။
အားလုံးအတွက် ပျော်ရွှင်ဖွယ် တနင်္ဂနွေနေ့ပါရှင်..